သင့်ရဲ့ Business English Skill ကိုဘယ်လို လေ့ကျင့်မလဲ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Knowledge » သင့်ရဲ့ Business English Skill ကိုဘယ်လို လေ့ကျင့်မလဲ?
သင့်ရဲ့ Business English Skill ကိုဘယ်လို လေ့ကျင့်မလဲ?
Min Thuta | Knowledge | June 9, 2019
အခုခေတ် လုပ်ငန်းခွင်မှာ Business English ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Business English ဟာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြောဆိုနေတဲ့ English နဲ့မတူပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်မှာ English ကို Professional ဆန်ဆန်သွက်သွက်လက်လက်ကျွမ်း ကျင်နေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Career Development အတွက်လှေကားသဖွယ် အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ဆိုလဲမမှားပါဘူး။ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သုံး English စကားကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ပြင်ဆင်မလဲ ဆိုတဲ့အချက် ငါး ချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။
နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကတော့ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ဖို့ပါ။သင်လေ့လာခဲ့သမျှကိုသင့်ရဲ့လက်ရှိနေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပြန်လည်အသုံးချတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါမှသာ သင့်ရဲ့လေ့လာခဲ့သမျှစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေမှာဖြစ်ပြီး အလေ့အကျင့်ကောင်းရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်လေ့လာထားသမျှစကားပြော conversation တွေ ဝေါဟာရတွေကိုသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ဒါမှမဟုတ်သင်နဲ့သက်တူရွယ်တူတိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်သူတွေနဲ့ဖြစ်စေလက်တွေ့အသုံးချပြောဆို ရေးသားပါ။ Presentation တွေမှာဖြစ်စေ Meeting မှာဖြစ်စေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပက်သက်ပြီးလေ့လာထားတဲ့ English ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းတွေကိုတင်ပြချက်များမှာအသုံးပြုပြီးလက်တွေ့အသုံးချပါ။ Business Writing တွေ Email Writing တွေကနေတစ်ဆင့်လဲ လက်တွေ့အသုံးချရေးသားလို့ရပါတယ်။
အခုဖော်ပြထားတွေနည်းလမ်းတွေကနေ သင့်ရဲ့ဘဝတက်လမ်းကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ Business English ကိုအလျင်အမြန်လွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာလို့ ရစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဝေမျှပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ Tip များ
by Min Thuta on October 27, 2019 -0Comments
ဘဝမှာအမြဲအောင်မြင်မှုကိုရရှိနေတာနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ ထိုအောင်မြင်မှုကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လဲလို ပါတယ်။မိမိကြိုးစားမှုအလျောက် ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ...
ရေများများသောက်ရင် ရနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးများ
by Min Thuta on October 30, 2019 -0Comments
ယခုလို အပူအောင်းတတ်တဲ့ အချိန်ကာလမှာ ရေကိုသေချာ သောက်ပေးခြင်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။ ရေအသက်တစ်မနက်ဆိုတဲ့အတိုင်းသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရေမသောက်ပဲမရှင်သန်နိုင...
by Min Thuta on October 29, 2019 -0Comments
အခုလို မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး ကာလတွေမှာ အအေးမိ ဖျားနာခြင်းတွေ နဲ့ အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို ကာလမှာ ကျန်းကျန်းမာမာ နေထိုင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုတွ...
All times are GMT 6.5. The time now is 11:48 pm.